Efe zuru ụwa ọnụ
30 ụbọchị ojuju afọ ojuju na Ego Back Ọ bụrụ na afọ ojuju nke ngwaahịa gị, anyị ga-ewepụta nkwụghachi zuru ezu, enweghị ajụjụ a jụrụ.
N'ime ihe ịga nke ọma 28.775 ebugharị iwu Anyị mere ọtụtụ ndị ahịa obi dị ụtọ dịka ọtụtụ iwu anyị bugara. Simply ga-esoro na nnukwu ezinụlọ anyị.
Ihe Omume nke Taa
Mma & Wellness
Kitchen & Ezinaụlọ
Home, Ogige & Ngwaọrụ
Adreesị weebụsaịtị anyị bụ https://joopzy.com.
Ihe data anyị na-anakọta na ihe mere anyị ji anakọta ya
Mgbe ndị ọbịa na-ahapụ ihe na saịtị ahụ anyị na-anakọta data dị na ụdị akwụkwọ ahụ, na adreesị IP na onye na-ahụ maka njikwa ihe nchọgharị iji nyere aka nchọpụta spam.
Enwere ike ịdenye eriri ederede aha na adreesị ozi-e gị (nke ana-akpọ oku) na ọrụ Gravatar iji hụ ma ị na-eji ya. Iwu nzuzo nzuzo nke Gravatar dị ebe a: https://automattic.com/privacy/. Mgbe ị kwadochara okwu gị, ọhụụ gị na-ahụ maka ọha na eze na okwu gị.
Ọ bụrụ na ị bulite ihe oyiyi na ebe nrụọrụ weebụ, ị kwesịrị izere ịdebe ihe oyiyi na data ebe ejiri etinye (EXIF GPS) gụnyere. Ndị nleta na weebụsaịtị nwere ike ibudata ma wepụ data ọ bụla site na ihe oyiyi na weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ịhapụ okwu na saịtị anyị ị nwere ike banye na ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e, na weebụsaịtị na kuki. Ndị a bụ maka ịdị mma gị ka ị ghara ịjupụta nkọwa gị ọzọ mgbe ị hapụrụ nkọwa ọzọ. Kuki ndị a ga -adịru otu afọ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma banye na saịtị a, anyị ga-edozi kuki oge na-ekpebi ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị na-anabata kuki. Kuki a enweghị data onwe onye ma tụfuo mgbe ị mechiri nchọgharị gị.
Mgbe ị banyere, anyị ga-edozi ọtụtụ kuki iji chekwaa ozi nbanye gị na nhọrọ ngosi ntanetị gị. Nbanye kuki ikpeazụ maka ụbọchị abụọ, na kuki nhọrọ ntanet ikpeazụ maka otu afọ. Ọ bụrụ na ịhọrọ "Cheta M", nbanye gị ga-anọgide maka izu abụọ. Ọ bụrụ na ịpụ na akaụntụ gị, a ga-ewepụ kuki nbanye.
Ọ bụrụ na ị dezie ma ọ bụ bipute otu isiokwu, a ga-echekwa kuki ọzọ na nyochaa gị. Kuki a na-agụnye enweghị data nkeonwe ma gosipụta na ID ID nke ederede ị deziri. Ọ na-agwụ mgbe ụbọchị 1 gasịrị.
Ejiri ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ
Ihe ndị dị na saịtị a nwere ike ịgụnye ọdịnaya agbakwunyere (dika vidiyo, ihe oyiyi, isiokwu, wdg). Inye ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-akpa àgwà kpọmkwem dị ka ma ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ gara na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a nwere ike ịnakọta data gbasara gị, jiri kuki, tinye mgbakwunye ọzọ nke atọ, na nyochaa mmekọrịta gị na ọdịnaya ahụ ejikọrọ, gụnyere nyochaa mmekọrịta gị na ọdịnaya ahụ agbakwunyere ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ma banye na weebụsaịtị.
Onye anyị na-ekerịta data gị
Ogologo oge ole ka anyị na-edebe data gị
Ọ bụrụ na ịhapụ okwu, a na-edebe okwu na metadata ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ na anyị nwere ike ịchọta ma kwado ihe ọ bụla na-esonụ na-ekwu na-akpaghị aka kama ijide ha n'ọdụ ụgbọ mmiri kwesịrị ekwesị.
Maka ndị ọrụ na edeba aha na weebụsaịtị anyị (ọ bụrụ na ọ bụla), anyị na-echekwa ozi nkeonwe ha nyere na profaịlụ ọrụ ha. Ndị ọrụ niile nwere ike ịhụ, dezie, ma ọ bụ hichapụ ozi gbasara ha n'oge ọ bụla (ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịgbanwe aha njirimara ha). Ndị nchịkwa weebụ nwere ike ịhụ ma dezie ozi ahụ.
Ihe ikike ị nwere banyere data gị
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a, ma ọ bụ nwere ihe ị ga-aza, ị nwere ike ịrịọ ka ịnweta faịlụ exported nke data onwe onye anyị jidere gbasara gị, tinyere data ọ bụla ị nyere anyị. I nwekwara ike ịrịọ ka anyị wepụ data ọ bụla anyị nwere banyere gị. Nke a anaghị agụnye data ọ bụla anyị ga-edebe maka nhazi, iwu, ma ọ bụ nzube nche.
Ebee ka anyị na-eziga data gị
Enwere ike ịchọta ihe ndị nleta site na ọrụ ọrụ nchọpụta spam.
Ozi kọntaktị gị
Otu esi echebe data gị
Kedu usoro iwu usoro anyị nwere ebe
Ihe ndị ọzọ anyị na-enweta data si
Kedu ihe ịmepụta na / ma ọ bụ nchapụta anyị na data njirimara
Ihe ngosi usoro iwu nke ahia
A ga-eziga paswọọdụ gị na adreesị ozi-e gị.